Fantail House, 33 Park Lane, Pounawea - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguHayden
Indlu enkulu, efudumeleyo kunye nepholileyo yembali eneempawu ezininzi. Ngaphesheya kwendlela ukusuka kwichweba kunye nomnyango osecaleni kwebala lokudlala ePounawea. Iinkundla zethenisi ziyafumaneka emva kwendlu. Ikhitshi langoku kunye nezixhobo ezilungileyo, umbono obanzi phezu kwechweba kunye nolwandle.
Ukuhamba ngokulula ukuya kumahlathi endalo okanye ukukhwela ibhayisekile. Kutheni ungatsibi kwi-kayak kwaye ujonge ichweba lechweba. IPounawea yindawo yokuphonononga kunye nokuphumla kwindawo yabucala. Ayixakekanga kodwa inezinto ezininzi eyothusayo yokwenza.
Indalo kunye neembono zezilwanyana zasendle phezu kwechweba zezona zikhethekileyo. Hlala kwidesika kwaye ixesha lokubukela lidlula njengoko imeko yechweba itshintsha ngamaza. Le yindlu enkulu eneempawu ezininzi kunye negumbi lokuhlambela elitsha.
Umbuki zindwendwe ngu- Hayden